Aung's Investment: 3/21/10 - 3/28/10
Just PFE chart update
Posted by Aung Myo Htet at 3/25/2010 06:40:00 PM0comments
Labels: PFE, technical analysis
Mid-week Alert - Pfizer (PFE)
ObamaCare bill အတည်ပြုပြီးမှာ သေချာတာကတော့ 32 million more Americanတွေဟာ ပိုပြီးတော့ Prescription Drugတွေကို သုံးလာမှာပါပဲ။ Healthcare bill voteမလုပ်ခင်က Drug Makerတွေဟာ Policy မသေချာမှုတွေကြောင့် Sell-off အလုပ်ခံလာရတာပါ။ Pfizerဟာ January 20မှာ Shooting Starဖြစ်ပြီးကတည်းက Sell-offအလုပ်ခံလာရတာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ တော်တော်လေး ရောင်းအားကျသွားပါပြီ။ ObamaCare billလည်း အတည်ဖြစ်ပြီး မနေ့ညက Pfizer, Merck အစရှိတဲ့ Pharmaceutical companiesတွေဟာ strongly recoverဖြစ်မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ စပြနေပါတယ်။
Fundamentally, Pfizerရဲ့ P/E, Dividend Yield, Balance Sheetအစရှိတာတွေဟာ တော်တော်လေး Reasonableဖြစ်နေပါတယ်။ P/Eဆိုရင် Cheapဖြစ်တယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
Technically, PFE ဟာ heavily oversold throughout February and March. PFEဟာ ပြန်ပြီး နာလန်ထူဖို့ အလားအလာ အများကြီးရှိပါတယ်။ မနေ့က Up Dayရဲ့ Volumeဟာကောင်းသလို MACDဟာလည်း Bullish Crossoverစပြနေပါပြီ။
Overall sector indexအနေနဲ့ Dow Jones Pharmaceuticals indexဟာလည်း EMA30ကို ဖောက်ပြီး Bullish signal စပြနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် PFEဟာ Politically, Fundamentally, Technically, အဘက်ဘက်ကနေ ကောင်းမွန်နေတာကြောင့် Definite Buyလို့ Recommendလုပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း ကျွန်တော်ပြောသမျှ မယုံပဲ Analysis လုပ်ကြည့်ပါလို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 3/23/2010 03:53:00 PM0comments
Labels: alert, bargains, fundamentals, technical analysis
Alert for Traders - 22/03/2010
Dow Jones Industrial(DJI) နဲ့ S&P 500(SPX) indexတွေဟာ ဆက်တိုက်တက်လာခဲ့တာ တစ်လရှိပါပြီ။ Technically, Marketတွေဟာ Overboughtဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီPostဟာ Long-term investorတွေအတွက် သိပ်အရေးမပါပါဘူး။ Short-term traderတွေအတွက်တော့ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေ ရေးထားပါတယ်။
DJI, SPX maintain strong up trend but for how long?
Major indexတွေဟာ up trendအောက်မှာ Closeစဖြစ်နေပါပြီ။ Recent Up Daysတွေမှာလည်း Volumeဟာ နည်းနည်းလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ DJIဆိုရင် 30-40 points ဝန်းကျင်ကနေကို မတက်တော့ဘူး။ သတိထားရမှာကတော့ DJIရော SPXရောဟာ January 20 Closeအပေါ်ကို ပြန်ရောက်သွားပါပြီ။ အထူးသဖြင့် SPXဟာ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ 17-month high ဖြစ်နေပါတယ်။ Traderတစ်ယောက်အနေနဲ့ Marketဟာ Light Volumeနဲ့ 52-week highဖြစ်နေရင် သတိထားရပါမယ်။ FTSE 100 (London Market Major Index) ဆိုရင် 21-month highနဲ့ Fridayက ပိတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ MACD_Hကို ကြည့်ရင် Bearish Divergenceပြနေတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Warning Signတစ်ခုပါ။
Back is Greece
Greeceအစိုးရဟာ EUခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မတိမကျ ကတိတွေကို အားမရနိုင်တော့ပါဘူး။ Frenchနဲ့ German ခေါင်းဆောင်တွေဟာ EUက bail out လုပ်သင့်သလား၊ IMFကပဲ bail outလုပ်သင့်သလားဆိုပြီး အခုထိ အငြင်းပွားနေကြတုန်းပါပဲ။ ကြားထဲက Greece အစိုးရက ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်လာပြီး သူတို့လည်း သိပ်စိတ်မရှည်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ Euro Dollarဟာ ပြန်ပြီး ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်ပြီး US Dollar Indexဟာ ၈၀အထက်ကနေကို မကျတော့ပါဘူး။ US Dollar Indexဟာ USနဲ့ Major Trading Partner currencyတွေရဲ့ Strengthနဲ့ တွက်ချက်ထားတဲ့ Trade-weighted indexတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ US Dollar မြင့်ရင် US Dollarနဲ့ ရှင်းရတဲ့ Commodityတွေ ဈေးကျတတ်ပါတယ်။ Investorတွေဟာလည်း Market နည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တာနဲ့ Stock Exposureကို လျော့ချပြီး Safe Havenဖြစ်တဲ့ US Dollarကို ပြောင်းကိုင်တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ Stock Marketအတွက် သိပ်မကောင်းပါဘူး။
အခုစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ US မှာ Health Care billအတွက် Voteလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ Abortionကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစက No Voteလုပ်ထားတဲ့ Democratsတွေဟာ Obamaနဲ့ Agreementရသွားတဲ့အတွက် Bill Passဖြစ်ဖို့ လိုတဲ့ ၂၁၆မဲကို ရဖို့ တော်တော်သေချာသွားပြီလို့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ Healthcare sectorဟာ US Economyရဲ့ ၆ပုံ ၁ပုံလောက်ရှိတာမို့ ဒီ Billဟာ Marketကို Significantly Impactဖြစ်မှာကတော့ သေချာပါတယ်။ Bill အတည်ဖြစ်ခဲ့ရင် Insurerတွေအတွက် ရေတိုမှာ သိပ်မကောင်းနိုင်ပေမယ့် Pharmaceutical Companyတွေအတွက်တော့ ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ Health care billပြီးရင် မရှေးမနှောင်းပဲ Financial Reform Billဟာ Sequelအနေနဲ့ ဆက်တိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
India has raised the rate 0.25%
တိုင်းပြည်ရဲ့ Inflationဟာ 16-month highဖြစ်နေတဲ့အတွက် Reserve Bank of India (RBI)ဟာ Interest Rateကို တင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါဟာ သာမန် Monthly Meeting outcomeမဟုတ်ပါဘူး။ ထဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လ Meetingမှာ ထပ်တင်ဦးမယ်လို့ Economistsတွေဟာ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ Indiaလို high inflationကို containလုပ်ရမှာ ဘယ်တိုင်းပြည်ရှိသေးတယ် ထင်သလဲ - China! တရုတ်အစိုးရဟာ Inflationမြင့်နေတာကို Acknowledgeလုပ်ပေမယ့် အခုထက်ထိ ဘာမှActionမယူသေးပါဘူး။ ဒီအပတ်ထဲမှာ ဘဏ်တွေရဲ့ Captial reserve ratioကို ထပ်မြှင့်ရင်မြှင့်၊ ဒါမှမဟုတ် Benchmark interest rateကို တိုးတော့မယ်လို့တောင် သတင်းထွက်နေပါတယ်။
ဒီသတင်းတွေအားလုံးဟာ Fundamental ကောင်းတဲ့ Stockကိုင်ထားတဲ့ Long-term investorတစ်ယောက်အတွက် အရေးမကြီးလှပေမယ့် Traderတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလုံး Appreciateဖြစ်လာတဲ့ Profitကို Realiseလုပ်ဖို့ နောက်ဆုံးChanceဖြစ်ဖို့ အလားအလာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ Short-term bearish but long-term still bullishပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 3/22/2010 10:57:00 AM0comments
Labels: alert, greece, pullback, reform bill, technical analysis